Madaxweynaha DFKMG oo caawa gaarey magaalada Kambala si uu uga qayb galo…. – SBC
Madaxweynaha DFKMG oo caawa gaarey magaalada Kambala si uu uga qayb galo….
Madaxweynaha dawlada FKMG ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa caawa gaarey magaalada Kampala ee caasimada wadanka Ugandha, isagoo galabta ka ambabaxay magaalada Muqdisho.
Ujeedada socdaalka Sheekh Shariif ayaa la xiriira casuumad uu ka helay madaxweynaha Ugandha Yoweri Museveni , casuumadaasi oo la xiriirta caleemo saarka madaxweynaha Ugandha oo beri ka dhacaysa wadanka Ugandha.
Yoweri Museveni ayaa dhawaan ku guuleystey doorashadii madaxtinimo ee wadankaasi ka dhacdey, waxaana xaflada caleemo saarkiisa lagu casuumaday madaxweyneyaal fara badan oo ka soo qayb gali doona.
Wariyaha SBC ee magaalada Kambala ayaa soo sheegaya in ilaa iyo maanta caasimada Ugandha ay soo gaarayeen madaxweyneyaal kala duwan, kuwaasi oo caleemo saarka madaxweynaha Ugandha halkaasi u tagey.
Wariyaha oo heley xog ku aadan madaxda caleemo saarka lagu casuumay ee aqbalay waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadamada dalalka Algeria, Saxaraha Galbeed, Kenya, Djibouti, Nigeria Zimbabwe, Congo, Rwanda, Burundi, Southern Sudan, Egypt, Malawi iyo Namibia.
Madaxweynaha Suudaan Cumar Al-Bashiir ayaa isaga waxaa casuumada ka qayb galka caleemo saarka madaxweynaha Uganda u gudbiyey wasiirka madaxtooyada Ugandha James Baba kaasi oo Isniintii gudoonsiyey Madaxweyne Al-Bashiir balse lama oga in uu aqbali doono iyo in kale tegitaanka wadanka Ugandha.
Al-Bashiir ayaa waxaa maxkamada caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ay amartey in la qabto meel kasta oo uu tago inkastoo amarkaasi wadamo badan ay ganafka ku dhufteen, waxaase dawlada Ugandha ay xaqiijisey in madaxweynaha Koonfurta Suudaan President Salva Kirr uu xafladaasi imaan doono.